दवावमा खनाल–नेपालः एमालेको विकल्प कि आत्मसर्मपण ? - नेपालबहस
दवावमा खनाल–नेपालः एमालेको विकल्प कि आत्मसर्मपण ?
| १०:०३:३२ मा प्रकाशित
२१ जेठ, काठमाडौं । एमालेबाट निष्कासित पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई आफ्नै समूहका नेताहरुले दवावमा राखेका छन् । विहीबार बसेको सो समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुले वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्ने वा एमालेमै रहेर ओलीसँग आत्मसर्मपण गर्ने भन्ने चाडो टुग्याउनु पर्ने भन्दै दवाव दिएका छन् । उनीहरुले नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने वा एमालेमै बस्नेबारे निर्णय लिन नेतृत्वलाई दवाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले एकताको आशामा वार्ता भन्दै समय खेर फाल्न नहुने भन्दै चाडै निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोलेका ४८ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये अधिकांशले निर्णय दिन ढिलाइ गर्दा कार्यकर्ता पंक्तिमा झन् निराशा बढ्ने भएकाले यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, निरज आचार्य, राजेन्द्र राई, सुरेन्द्र मानन्धर, जीवनराम श्रेष्ठ, परशुराम मेघी गुरुङ, गरिमा साहलगायतका चार दर्जन नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । संवादको नाममा ओलीले अल्मल्याउने र नाटक मात्रै गरिरहने भएकाले त्यसलाई चाडै टुग्याउन पर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।
बैठकको सुरुवातमा नेता माधवकुमार नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै संवादले सकारात्मक निष्कर्ष निकालेमा राम्रो हुन्थ्यो तर समय तोकेरै संवाद टुग्याउनु पर्ने जनाएका थिए । बाहिर हल्ला चलाइएजस्तो व्यक्तिगत तबरमा एकताको प्रयास नभएको उनको भनाइ थियो । ‘बाहिर हल्ला चलेजस्तो एकताका लागि व्यक्तिगत छलफल भएका होइनन् । मलाई जानकारी गराएरै साथीहरूले छलफल गर्नुभएको हो, तर बाहिर आएजस्तो सहमति भएको वा ओली २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्कन तयार भने भएका छैनन’, नेता नेपालको भनाई उद्यृत गर्दै एक नेताले भने ।
नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि अनौपचारिक संवादलाई सकारात्मक बताएको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले जानकारी दिए ‘अनौपचारिक संवादमार्फत मात्रै सहमतिमा पुगिँदैन । यसले वार्ताको वातावरण निर्माण गर्ने हुनाले सकारात्मक नै मान्नुपर्छ, ओली जेठ २ मै फर्कने अवस्था आए राम्रै हुन्छ तर ओली त्यो अवस्थामा फर्कने अवस्था छैन’ नेता आचार्यको भनाई थियो । नेता नेपालले वार्ताको बहानामा अध्यक्ष केपी ओलीको दाउपेच पनि हुनसक्ने भएकाले सजग रहनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता झलनाथ खनालले नयाँ पार्टी घोषणामा ढिलाइ गर्न नहुने मत राखेका छन् । पुराना पुस्ताबाट नयाँ जोसको आन्दोलनको नेतृत्व प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै उनले नयाँ पुस्तालाई त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्न पनि आग्रह गरेका थिए । ‘हामी त अब बुढो भइहाल्यौँ । तपाईं युवाहरूले यसको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ,’ वरिष्ठ नेता समेत रहेका खनालले भने । धेरै जसो नेताहरुले ओलीले जालझेल गर्न खोजेको बताउँदै त्यसबाट सजग हुनुपर्ने बताएका थिए ‘पार्टीभित्र समस्या हुँदैमा तपाईंहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
दक्षिणपन्थी भासमा लागेका ओलीले पार्टीलाई ध्वस्तै बनाउनेछन् । त्यसैले उनको जालझेलमा हामी फस्नु हुँदैन, भन्ने धारणा आएको छ यसले पार्टी नै बनाउन मद्दत गर्छ साथै जालझेल गर्ने नै हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तुरुन्तै विकल्प दिनु पर्ने धारणा राखेका छन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । बैठकमा नेता भीम रावलले पनि एकताको वार्ता बारेको प्रगति आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । ‘एकताका लागि भइरहेका प्रयासका उपलब्धिबारे मलाई केही पनि जानकारी छैन । छलफलमा सहभागी भएका साथीहरूले यसबारेमा बोल्नुहोला । हामीले नयाँ कदम चाल्न ढिला गर्दा कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा बढिरहेको छ । कार्यकर्ताहरूको उत्साहलाई मर्न नदिन हाम्रो निर्णय यथाशीघ्र हुन जरुरी छ,’ रावलले बैठकमा भनेका थिए ।
उनले नेतृत्वलाई कारवाही गरेर कसरी संवाद अघि बढ्छ भन्दै कारवाही फिर्ता गरे मात्रै संवाद अघि बढ्ने बताएका थिए । ‘अनौपचारिक संवादमा हामीले २ जेठ २०७५ को बटमलाइन छाडेका छैनौँ । त्यसलाई पार्टी अध्यक्षले कसरी औपचारिकता दिनुहुन्छ त्यसबाट मात्रै एकताको अवस्थाबारे भन्न सकिन्छ । अहिले ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ घनश्याम भूषालले भने ।
बैठकमा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एकताका लागि प्रयास जारी राखेपनि त्यसले सार्थकता पाउनेमा भने शंका व्यक्त गरेका थिए । हामीले एक–दुई दिन कुरौं । परिणाम निस्किएको अवस्थामा मात्रै छलफलका कुरा बाहिर ल्याउँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ । पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो कसरतमा सार्थकता पाउनेमा अब आशावादी हुने ठाउँ देखिएन,’ बैठकमा पाण्डेको भनाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
कोरोनाको मुख्यथलो बन्दै रोपाइँ १ मिनेट पहिले
सरकारी एम्बुलेन्स प्रयोगबिहीन हुँदा बिरामी मर्कामा १७ मिनेट पहिले
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले अवितरित हकप्रद लिलामी ल्याउँदै १९ मिनेट पहिले
मलाई त तै सुवा मन पडी बजारमा सार्वजनिक ३२ मिनेट पहिले
योग परम्परालाई नयाँ उचाइबाट अघि बढाइनुपर्छः उपप्रम पौडेल ३६ मिनेट पहिले
सल्लेरीका विस्थापित परिवारलाई हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पुर्याइयो ४१ मिनेट पहिले
अमेरिकाको अलाबामामा भएको दुर्घटनामा परी ९ बालबालिकासहित १० को मृत्यु ५२ मिनेट पहिले
राहत पाएपछि गन्धर्व बस्तीमा खुशीयाली २ हप्ता पहिले
सांसद पालले गरिन सवारीसाधन फिर्ता ४ हप्ता पहिले
केही सार्वजनिक संस्थान सरकारका लागि वित्तीय बोझ ३ हप्ता पहिले
सामूहिक राजीनामा दिन ओली प्रचण्डसामु महासचिव पौडेलको प्रस्ताव ७ महिना पहिले
सहमति खोज्ने सहमति गर्दै सकियो सचिवालय बैठक ११ महिना पहिले
कोरोनाको परीक्षण तीव्र बनाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन १ वर्ष पहिले
झापा गोली काण्ड : एक्काईस घण्टा बित्दा पनि शव उठेन १० महिना पहिले